चिनियाँ क्लबमा बेल ! - सबै खेल
चिनियाँ क्लबमा बेल !
६ श्रावण २०७६, सोमबार २०:२८ July 22, 20190Comments gareth bale, real madrid, Zidane
जिनेदिन जिदान प्रशिक्षकमा पुनः क्लबमा फर्किएपछि रियल म्याड्रिडमा पर्याप्त अवसर नपाएका बेल्स स्टार ग्यारेथ बेल चिनियाँ क्लबमा आबद्ध भएको चर्चा अहिले ट्रान्सफर मार्केट तातेको छ ।
बेलायती पत्रिका मिररका अनुसार बेले चाइनिज सुपर लिगको क्लबसँग जिआङ्सु सुनिङ सम्झौता गरिसकेका छन् । प्रतिसाता १ मिलियन पाउण्ड पाउने गरी बेलले जिआङ्सु सुनिङसँग सम्झौता गरेको मिररले उल्लेख गरेको छ । बेल केही दिनमै मेडिकलका लागि चीन जाने बताइएको छ ।
जिदान प्रशिक्षकमा रुपमा पुनः रियल फर्किएपछि रियलमा बेलको भविष्य अन्योलमा थियो । बेल र जिदानबीच सम्बन्ध राम्रो नभएका उनी पछिल्लो समय बेन्चमा बस्न बाध्य थिए । प्रि सिजिन टुरको बार्यन म्युनिखविरुद्धको पहिलो खेल पनि टिम स्थान बनाउन असफल भएपछि बेल रियल छाडने मनिस्थितिमा पुगेका थिए ।
बायर्न म्युनिखविरुद्धको खेलपछि जिदान बेलले भोलि नै क्लब छाडे पनि कुनै आपत्ति नहुने अभिव्यक्ति दिएपछि रियलमा बेलको भविष्य अनिश्चित बनेको थियो । जिदानको त्यस्तो प्रतिक्रियासँगै बेल र उनका एजेन्ट उनीप्रति रुष्ट थिए । रियल छाड्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।
रुष्ट बनेका बेलका एजेन्ट जोनाथन बार्नेट जिदान फुटबलका कलंक भएको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बेलले रियलका लागि धेरै योगदान दिएका छन् । आफैं पूर्वखेलाडी भएर पनि जिदानले खेलाडीको सम्मान गर्न जानेनन् । उनी फुटबलका कलंक हुन् ।’
बेललाई भित्र्याउन इंग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड, टोटनह्याम, जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख र इटालियन क्लब इन्टर मिलानले चासो देखाएका थिए । यता, रियलनै बेललाई पिएसजी पठाएर केही पैसा थपेर ब्राजिलियन स्टार नेमार ल्याउने योजनामा थियो ।
बेलले जिआङ्सु सुनिङसँग सम्झौता गरिसकेको खबरसँगै रियलका फ्लोरेन्टिनो पेरेजको बेलसँग नेमार साट्ने योजना पनि तुहिएको छ ।
जिआङ्सु सुनिङसँग सम्झौता गरेपछि बेल इन्टर मिलाउन आउने सम्भावना पनि बढेको छ । जिआङ्सु सुनिङ र इन्टर मिलान दुवै क्लब चिनियाँ कम्पनी सुनिङ होल्डिङ ग्रुपकै स्वामित्वमा रहेकाले बेल लोनमा इन्टर आउने सम्भावना बढेको हो । बेललाई भित्र्याउने इन्टरले पटक–पटक प्रयास गरेको थियो ।
← टि–२० विश्वकप छनोट : कुवेतमाथि मलेसियाको सहज जित
कतारविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल, पारस र ज्ञानेन्द्र दिलाए राम्रो सुरुवात →
२५ पुष २०७६, शुक्रबार १७:१३ 0
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार १९:४३ 0